Izingxenye ezishibhile ze-aluminium alloy radiator extruded parts ifektri kanye nabaphakeli | I-Ouzhan
Noma ngubani oqonda izici ze-aluminium uyazi ukuthi umsebenzi wamakhemikhali we-aluminium ku-alloy uyasebenza kakhulu, futhi ungasabela ngokushesha nge-oxygen emoyeni ukwakha ifilimu elincane elivikelayo le-aluminium oxide.
I-extrusion yephrofayili ye-aluminium eyenziwe ngokwezifiso
Ubukhulu befilimu bucishe bube yi-1μm, efanayo ne-substrate. Isibopho siqine kakhulu, okwenza indawo yengubo idlule futhi ivimbele i-self-oxidation ekuqhubekeni. Ngakho-ke, i-aluminium alloy uqobo alwesabi umoya-mpilo, futhi akukho ukugqwala komoya-mpilo.
I-aluminium alloy inefilimu evikelayo ye-aluminium oxide evikela ngaphezulu, ngakho-ke kunzima ukunamathela ekulweni nokugqwala. Noma ngabe isetshenzisiwe, ibhlokhi yokulwa nokugqwala engxenyeni engaphakathi ye-aluminium alloy kulula ukuwa ngaphansi kokuwashwa kwamanzi ngaphakathi kwerediyetha. Ngakho-ke, ama-radiator e-aluminium alloy akumele asetshenziswe ezinhlelweni zokushisa eziphakathi, kepha afaneleka kakhulu ezinhlelweni zokuzifudumeza.
Izici ze-aluminium alloy radiator: ngenxa yokushabalalisa okuhle kokushisa kwe-aluminium alloy, umgomo wangaphakathi wokulwa nokugqwala werediyetha
Ukwelashwa kwangaphakathi kwe-anti-corrosion kwe-radiator ukufaka ingaphakathi le-radiator ngendwangu yokubambelela okuhle (ukunamathela) nokumelana nokugqwala Upende ophilayo uvikela amanzi ngensimbi noma i-aluminium, ngaleyo ndlela adlale indima ekuvikeleni ukugqwala.
Imininingwane ye-extrusion yephrofayili ye-aluminium eyenziwe ngokwezifiso
Izinto Ingxubevange ye-Aluminium
Ukusetshenziswa I-Aerospace, ukwakhiwa kwemikhumbi, ukwakhiwa, irediyetha, ezokuhamba, ukucubungula imishini, imishini yezokwelapha kanye nezidingo zansuku zonke.
Langaphambilini Ukwelashwa kwe-6016 aluminium alloy heat CNC
Olandelayo: Izingxenye ze-Anodized aluminium alloy machining